Barashada + Shaqaynta - GO! SPECTRUM SCHOOL
Akhri websaydkayaga afkaaga hooyo
spectrum School > koorsooyinka our > Barashada + Working
Barashada + Shaqaynta (Waxbarashada waqtiga-dhimman)
Isku qor waxbarashada waqti-dhiman
isla markiiba bilaabi waxbarashadaada.
Waxaad geli kartaa barashada iyo shaqeynta wakhti kasta inta lagu jiro sanad dugsiyeedka.
Nidaamka qaybsan kartaan barnaamijyada ka qalin ugu waqti kasta sanad dugsiyeedka.
Barashada iyo Ka Shaqeynta DBSO Antwerp waa nooc ka mid ah baro labo.
Waxaad raaci kartaa wadadan Ruggeveld Campus.
Barashada + Working
Waxaad dhiganeysaa laba cisho oo dugsiga ah waxaadna shaqeysaa saddex maalmood. Sidaas darteed waxaad shaqeyneysaa shan maalmood wiiggii.
Waxaad baraneysaa xirfad iyo waxaad kaloo heli kartaa dibloome.
Koorsooyinku waa kuwo caadi ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaad noqoto khabiir ku takhasusa tallaabadaada adigoo raacaya talaabo. Kadib talaabo kasta, waxaad heleysaa caddaynta waxa aad horay u qaban kartid.
Iskuulka waxaa kormeeraya macalimiintaada. Waxa kale oo aad leedahay lataliye shaqo oo isku mid ah
Waxaad baraneysaa xirfad labadaba dugsiga iyo goobta shaqada.
Haddii aad heshay qaar ka mid ah aqoonta xirfadeed, waxaad heleysaa shahaado. Haddii aad haysato shahaado ku filan oo ka-qaybgal, waxaad heli doontaa shahaadada karti-xirfadeedka.
Barnaamijyada badidooda waxay qaataan laba ilaa afar sano.
Qof kasta oo dhalinyaro ah waxuu baranayaa isbedelkiisa. Waqtiga tababarkaaga ayaa sidaas darteed lama hubo horay. Wax kasta oo aad ka barato shaqadaada ayaa sidoo kale ku jira dugsiga.
Waxaad barbaradkaaga la wadaageysaa macallinkaada usbuuc walba si aad u ogaatid waxa aad baraneyso.
Dib u hel diploma
Waxaad heli kartaa dibloomada waxbarashada dugsiga sare ee xarunta.
Waxaad raacdaa maadooyinka guud hal maalin toddobaadkii. Barnaamijka casharkan wuxuu la mid yahay tan BSO oo ah waxbarasho waqti-buuxa ah.
Waxaan sidoo kale abaabulnaa casharadan. Taasi waa, waxaad qalinjabisay sida ugu dhakhsaha badan inta aad wax kasta gaartay. Waad qalanjabin kartaa wakhti kasta inta lagu jiro sanad dugsiyeedka.
Qof kasta oo dhalinyaro ah barto uu orod u gaar ah oo raaca barnaamijka gaar ah. Waxaad sidaas daraaddeed ma "fadhiisan" kartaa.
Haddii aad isku qorto xarunteena, waxaad qori doontaa imtixaanka gelitaanka. Iyada oo imtixaankan la sameeyay, waxaad tusi kartaa waxaad samayn karto. Wax kasta oo aad sameyn karto, waa inaadan wax badan ka baran. Sidaas darteed waxaad ka heli kartaa ka-dhaafitaan mawduucan. Toddobaad walba waxaad arki kartaa waxaad u baahan tahay inaad barato macalinkaaga.
L & W waxay leedahay fasalo cusub
Laga soo bilaabo 1 September September 2017, qayb ka mid ah casharradu waxay ka dhici doontaa fasallada cusub ee dhismaha cusub dhinaca dhinaca kale ee waddada. Spectrumschool waxay si joogto ah ugu maalgelisaa horumarinta tayada koorsooyinkayaga iyo hagaajinta kaabayaasha.
Qolooyinka cusub, shahaadada 3 iyo "diploma +" ee Waxbarashada + raaci doonta casharada PAV.
Tababarka Waxbarashada + Shaqada
Maamulka & IT
Dhismaha & Wood
Saadka & Suuq-geynta
Dhaqanka & Mechanics
Waxaad baraneysaa sida loo abaabulo dhaqdhaqaaqyada isboortiga loona hagaajiyo dadka dhallinyarada ah ee xaafadda iyo ururrada maxalliga ah. Waxaad baran doontaa qalabka iyo qalabka isboortiga waxayna bartaan sida loogu dhiirigeliyo dhalinyarada inay jimicsi sameeyaan. Waxaad ka heleysaa aqoon wax ku ool ah oo ku saabsan kuleylinta, nafaqada, anatomy, firfircoonida kooxda, iyo sidoo kale gargaarka koowaad. Waxaad baraneysaa adigoo sameynaya isboortiska iyo isboortiska kubadda. Kormeeraha isboortiga ee waxbarashada waqti-dhiman waa tababbarka kaliya ee isboortiga ee heerka BSO.
Waxaad mas'uul ka noqon doontaa helitaanka, maamulida taleefanka, u dirista boostada, qabanqaabinta hawlaha maamulka, dabagalka dabaqada, sameynta hawlaha taageerada ee shirarka, iyo qabashada hawlaha xafiiska taageerada.
Waxaad baraneysaa sida loo dhiso kombiyuutar waxayna u diyaarineysaa isticmaalka. Waxaad baraneysaa sida loo rakibo kombuyuutarrada iyo goobaha la xidhiidha (ha ahaato ama aan ku jirin jawiga shabakada) oo dib u soo celiya. Marka lagu daro aqoonta farsamada ee software-ka iyo qalabka, waxaad sidoo kale heleysaa xirfadaha iibka iyo aqoonta aasaasiga ah ee ku saabsan shaqooyinka rakibaadda koronto.
Naqshadaynta - shaqo-abuurid - shaqeyn la taaban karo
Waxaad baraneysaa wax walba oo ku saabsan rakibidda kuleylka dhexe iyo fayadhowrka. Waxaad baraneysaa wax walba oo ku saabsan tuubista. Waxaan kuu diyaarineynaa inaad ka shaqeysid shirkad diirimaad ah ama biyaha tuubeeyaha. Tababarkani wuxuu dhammaystiraa xirfad khafiif ah.
Barnaamijkan wuxuu rabaa in uu kuu sameeyo shaqaale xirfad leh / xiddig. Dhammaan barashadu waxay ku barayaan inaad fahamto oo aad hirgeliso hawlahaaga dhismaha fudud markaad raacdo tilmaamaha badbaadada.
Waxaad baraneysaa inaad sameysid, ku shaqeyso oo aad nadiifiso mashiinno kala duwan, iyo inaad barato inaad la shaqeyso qalabka gacanta. Waxaad soo iibisaa suuqyada, miisaska iyo miisaska loogu talagalay gudaha kala duwan: jikada, musqulaha, dukaamada qurxinta, martigelinta, xafiisyada iyo kursiyada, qurxinta gudaha.
A (caawimo) waardiye ayaa ka shaqeeya qolka. Waxaan ku baraynaa sida loo adeegsado macaamiishaada, sida loo diyaariyo miis iyo sida loo bixinayo cuntada kadib. Waxaad kaloo baraneysaa sida loo adeegsado khamri. Waxaad ka shaqeysaa makhaayad ama makhaayad.
(Caawin) cunto karis
Baro wax walba oo ku saabsan cunto karinta; jarida khudradda, diyaarinta suugada iyo isku dhafka cuntada. Tababbarka waxaa ka mid ah karinta qabowga iyo kuleylka. Waxaad baran doontaa sida loo diyaariyo macmacaanka. Ma ogtahay inaan sidoo kale ku bareyno sida loo kariyo xalal, khudradda iyo vegan?
Waxaad baraneysaa sida loo xareeyo, xayirnaayo iyo nidaam ahaan lagu keydiyo bakhaarada iyadoo la isticmaalayo gawaarida forklift. Intaas waxaa dheer, waxaad baraneysaa inaad u diyaariso amarrada adoo adeegsanaya nidaam kombiyuutarka adoo diyaarinaya alaabta. Shaqada jidheed had iyo jeer waa lagama maarmaan bakhaar. Shaqada bakhaarada waa wax aad u badan waxayna kaloo u baahan tahay inaad si fiican ula shaqeyso asxaabtaada.
Waxaad baraneysaa inaad si sax ah u hesho qalabka, gawaarida, ka furfurida iyo maqnaashaha. Waxaad baran doontaa sida loo kala soocayo, jeeg, diyaarinta maraakiibta, u dhaqdhaqaaqa iyo badbaadinta. Si aad tan u samayso waxaad baran doontaa inaad isticmaasho qalabka sida jumlada ama jinniga iyo qalabka istuudinta sida baalalka, sanduuqa, kafateeriga, .... Waxa kale oo aad baraneysaa sida loo xajiyo si badbaado iyo waxtar leh iyo sida loo tiriyo, scan iyo diiwaangelinta alaabta. Ugu dambeyntiina, waxaad baran doontaa inaad hubiso oo aad buuxiso dukumentiyada u dhiganta.
Muhiimadda koorsadani waxay ku jirtaa shaqo sida iibiye - iibiye leh asal farsamo. Waxaad baraneysaa macaamiisha. Waxaad tabobareysaa qaybta waxbarashada ee qayb ka mid ah sida loola xiriiro. Waxaad baran doontaa farsamooyinka bandhigida iyo iibinta iyo helitaanka aqoon farsamo iyo aqoonta wax soo saarka.
Muhiimadda koorsadani waxay ku jirtaa shaqo sida iibiye - iibiye dukaanka, dukaanka ama dukaanka cuntada. Waxaad baraneysaa macaamiisha. Waxaad ku shaqeyneysaa isgaarsiin wacan. Waxaad baran doontaa farsamooyinka bandhigida iyo iibinta. Waxaad helaysaa aqoon farsamo iyo aqoon aqooneed.
Waxaad baraneysaa inaad si xornimo leh u xirto oo si sax ah ugu xirato xarun alxanka ah si aad ugu xirto electrode / MIG-MAG iyo TIG. Waxaad ku tababartaa mishiinka semi-automaatikada shaqooyinka ku jira aluminium ama (aan qallalayn) birta oo baro weldooyinka kala duwan. Waxaad baraneysaa inaad qalabka si adag u isticmaasho sida waafaqsan tilmaamaha soo saaraha.
Kormeeraha Daryeelka Ilmaha
QEYBTA-TIMES // BSO // CAMPUS RUGGEVELD
Waxaad baraneysaa inaad la shaqeyso caruurta, barbaariyayaasha ama carruurta dugsiga hoose. Waxaad ka shaqeyneysaa dukuminti ama waxaad ku jirtaa xannaanada carruurta ka hor iyo ka dib. Mararka qaar waxaad ka shaqeysaa dugsi aad adigu taageerto waxbarashada barbaarinta caruurta ama dugsiga hoose.
Qoob-ka-shaqeeye - timo-hagar
Hay'adaha Daryeelka Shaqaalaha Soogalootiga
Shaqaale sahay u ah guryaha xanaanada iyo xarumaha daryeelka ayaa mas'uul ka ah hawlaha saadka. Waxaad baraneysaa tababbarka sida loo nadiifiyo qolalka, waxaad cunto ku soo qaadataa adigoo raacaya hawlaha waayeelka. Shaqaalaha logistikada ma qaban karaan hawlo daryeel ah.
kalkaalisada A daryeel u qabata hawlo aasaasiga ah ee guryaha xanaanada iyo xarumaha. Waxaad ku caawin dadka waayeelka ah iyo idiinkuna hanuuniyo iyaga. aad hal mar ku dhameysato koorsadan waxaad sii takhasusay karaa sida Nursing darran.
Khabiir daryeelka caafimaadka A shaqeeyaan laga yaabaa in si madax-bannaan ee guriga xanaanada ama hawlgabka ah. Haddii aad buuxiso koorsadan waxaad heli doontaa fiisada of Nursing darran. Waxaad haysataa fursad aad u weyn in ay ka shaqeeyaan.
Carruurta raacno Dual
Tababarkan waa mid gebi ahaanba cusub! Waxaad baraneysaa inaad la shaqeyso socod baradka iyo sidoo kale caruurta dugsiga hoose. Koorsadan waxaad si gaar ah u baran doontaa dabaqa shaqada, sida daaqada iyo xannaanooyinka.
Waxbarashada waqti dhiman ee ficilka
WAXBARASHADA PART-TIME: Explained
SMART Spectrum DUGSIGA DUGSIGA
WAXBARASHADA PART-TIME .... in ka badan buuxa!
Waxaad isku barashada shaqada. Dual waxbarashada waa in waxbarasho waqti dhiman dhexe. Waxaad heleysaa hal maalin oo ah waxbarashada guud iyo hal maalin oo ah waxbarashada xirfadeed ee dugsiga. Waxaad baran doontaa dabaqa shaqada saddex maalmood. Sidaas ayaad u shaqeyneysaa waqti buuxa!
Nidaamkan dhexdiisa waxaad raaci kartaa koorasyo ​​badan oo ka mid ah Suuqyadda, STEM, Ciyaaraha, Saadka, Cateringka iyo Daryeelka. Marka lagu daro tababbarka waxbarashada wakhti-wakhti, waxaanu sidoo kale siinaa qof kasta oo daryeel caafimaad ah. Waxan si gooni ah u eegnaa arday kasta. Sidan ayaad ku heli kartaa taageero shakhsiyeed halkaas oo aad ku kobcin karto naftaada.
Nidaamkan waxaa suurta gal ah laga bilaabo 15 ilaa sanadka 25. Waa inaad buuxisay ugu yaraan laba sano oo waxbarasho buuxa ah.
-Time Part waxbarasho ku haboon si aad u wanaagsan la suuqa shaqada. Waxaan diyaarin dadka dhallinyarada ah shaqo joogto ah iyo dakhliga xasilan oo ammaan ah.
QAYBTA-TIME Antwerp Waxbarashada
Spectrum School laftiisa soo bandhigaysaa sida bixiyaha tayada ah waqti dhiman waxbarashada Antwerp. Waxaan muhiimad weyn u go'an oo waqti-buuxa ah. Taas macnaheedu waa in aan ku dadaalnaa in la hubiyo in qof walba uu haysto in ay ka shaqeeyaan; doorbidayaa in shaqo joogto ah iyo bixisay. In Antwerp waqti-dhiman waxbarashada noo gooni sababtoo ah waxaan weli heerka shaqo ugu sareeya. Taasi waa mudnaanta ee ardayda oo ka mid ah taliyayaasha shaqada our.
Waxaan abaabuli our waxbarashada koorsooyin waqti-dhiman in Deurne-Antwerp. Shaqo aan idinla shaqeeyo si aad u hesho oo dhan gobolkii Antwerp. Waxaan mar walba shaqo raadinta taameysid in meesha aad ku nooshahay si aad u hana sameyn dhaqdhaqaaq aan loo baahnayn. waxbarasho waqti-Part waa xoog badan yahay ee gudaha iyo hareeraha Antwerp. Taasi macno. In Antwerp aad shaqo badan oo ay ardaydu waxbarasho waqti-dhiman oo aad u tegi kartaa. Sababtoo ah waxaa jira dad badan oo ku nool iyo ka shaqeeya Antwerp, sidoo kale waxaad heli doontaa hawlo badan oo ay ka mid yihiin guryaha waayeelka, xanaanada caruurta, ... Antwerp ma aha wax aan waxba ahayn in Magaalooyinka dhaqaale ee Flanders oo waxaa qoorta waqti dhiman waxbarashada Antwerp oo keliya, laakiin ka faa'iideysan.
JOBS IN WAXBARASHADA PART-TIME
Waxaad ka qaybqaadan kartaa noocyo kala duwan oo shaqooyin ah Iskuulka Spectrum. Haddii aadan garanayn waxa shaqadu ka dhigan tahay, markaa mashruuca hordhaca ah ama mashruuca biriijka waa shaqo ku habboon waxbarashada waqtiga-dhimman. Isla marka aad muujiso inaad ogtahay waxa shaqadu tahay, waxaanu si wadajir ah u raadin doonnaa shaqo joogto ah.
shaqo A caadiga ah waxay ka dhigan tahay in aad shaqo dhab ah iyo in sidoo kale lagu siin doonaa in aad si buuxda u shaqeeyaan. The qandaraasyada ugu dambeeyay ayaa la diyaarin si aad u sii dhinaca lacagta ku tiirsan waalidiinta aad iyo aad lacag carruurtaada haysan karto.
waxbarashada waxbarasho waqti-dhiman ama shaqo ku salaysan inta badan keenta in shaqo joogto ah
Ku dhowaad dhammaan barnaamijyadeenna aan abaabulno waxay ku xiran yihiin xirfad yaraanta ama qaybta maskaxda. Taas macneheedu waxa weeye marka aad qalinjabisay, waxaad sidoo kale si fudud u heli doontaa shaqo fiican oo lacag leh. Helitaan shaqo weligeed ma fududa; laakiin keligaa ma tihid. Waxaan kaa caawineynaa habkaada iyo inta badan ka dib markaad tabobarkaada waxbarashada wakhti dhiman aad sii wadi karto inaad la shaqeyso qandaraas joogto ah goobtaada goobtaada.
Isticmaal dhammaan ardayda, dadka dhalinyarada ah, macalimiinta iyo kormeeraha Dugsiga smart. Ciyaaryahanka da'da yar kasta helo diiwaangelinta xisaab. Waa channel ee isgaarsiinta ugu weyn ee u dhexeeya ardayda iyo CDO ah.
SHAQADA BARASHADA waa magac kale oo loogu talagalay waxbarashada waqti-dhiman
Sida cad, ma fududa. Marka laga hadlayo waxbarashada waqti-dhiman, waxaan mararka qaarkood ka hadlaynaa waxbarashada shaqada; laga bilaabo barashada labada iskuul; barashada iyo shaqada ...
Kuwani waa dhamaan magacyada kala duwan ee waxbarasho waqti-dhiman.
nuxurka waxa ay tahay in la mideeyo shaqada iyo waxbarashada iyo in ay xiriir this baadhi karaa xirfad ama farsamo si ay faahfaahin yar.
Waxbarashada shaqo ama waxbarashada waqti dhiman ah? Dabeecad aad u fiican haddii aad rabto inaad ku fiicnaado shaqadaada.
WAXYAABAHA KALA DUWAN TAHAY ARDAYDA DUAL IYO WAXBARASHADA SHARCIYADA
Spectrum School qabanqaabisaa waxbaridda waqti-dhiman iyo waxbarashada ee dual kala duwan. ah waxbarasho waqti dhiman isu geeyo waxbarashada dugsiga barashada ee goobta shaqada. sidoo kale waxaa lagu siin doonaa marka aad ka shaqayso.
In dual waxbarashada waa xoogga ku saabsan barashada goobta shaqada. Waxaad kartaa waxbarashada dual waxbarashada dugsiga waqti-buuxa ah sida waqti-dhiman. The buuxda aadan doonaa lacag shaqada, waqti-dhiman in kastoo. Waayo, dual barashada shuruudaha galo ka adag waxbarasho waqti-dhiman ah. Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan labadii fursadaha ama haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan farqiga u dhexeeya labada nidaam ogahay, fadlan nala soo xiriir. Waxaan kaa caawin doontaane.
> Baro waxyaabo badan oo ku saabsan barashada barashada
Read our website Spectrum School oo ku qoran luqadda kuu gaar ah.
Hubi tarjumaadaha caalamiga ah ee barashada spectrum dugsiga iyo shaqada.
turjumaadaha Kuwan waxaa ahbaa by computer oo aan had iyo jeer sax ah. Si kastaba ha ahaatee, akhriska ee qoraalka waa la hubaa.